အနုပညာအစွမ်းတွေနဲ့ လေလံတွေ အောင်ချက်ကြမ်း နေတဲ့ ဘက်စုံထူးချွန်သူ ဒါရိုက်တာ စားဖိုမှူးကြီး ကိုပေါက် – All Update News
အနုပညာအစွမ်းတွေနဲ့ လေလံတွေ အောင်ချက်ကြမ်း နေတဲ့ ဘက်စုံထူးချွန်သူ ဒါရိုက်တာ စားဖိုမှူးကြီး ကိုပေါက်
November 19, 2021 November 19, 2021 - by admin2 - LeaveaComment
လွတ်မြောက်နယ်မြေက ဒါရိုက်တာကိုပေါက်ဆွဲထားတဲ့ သိန်း ၁၆၀ တန်သွားတဲ့ ပန်းချီကားတွေရဲ့ အကြောင်းကိုပေါက်ကြီးကို ပထမဆုံးတောင်းပန်ချင်ပါတယ်နော်။
Admin ဝရမ်းပြေးက နေရာပြောင်းရင်း၊ တွင်းအောင်းရင်းနဲ့ သေချာမရောင်းပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။နောက်ပြီး ပညာရေး Live show လက်မှတ်ကရောင်းပေးရမယ့် တာဝန်ကြီးပါ ရောက်လာတော့ အဲ့ဘက် အရင်ရောင်းပေးနေခဲ့ရတာပါ။
(ပါလေရာ ဒေါ်အေးဘုံကို ကိုယ့်ညီမအငယ်ဆုံးလေး မလိမ်မိုး မလိမ်မာလေးကိုထုံးစံတိုင်း ခွင့်လွှတ်ပေးပါ ကိုကြီးကိုပေါက်ရေလက်မှတ် ၁၀၀၀ မှာ ၇၉၁ စောင် ရောင်းပြီးခဲ့ပါပြီ။ (ဝယ်လို့ရပါသေးတယ်နော်) ၇၉၁ စောင်ဆိုတော့ ကျပ် သိန်း ၁၆၀ နီးပါးတန်တဲ့ ပန်းချီကားတွေဖြစ်သွားပါပြီနော်။
နွေဦးတော်လှန်ရေး ပန်ချီကားတန်ဖိုးဟာ စွပုပြောသလို သန်းနဲ့ပြောရင်တော့ ၁၆ သန်းတန် ပန်းချီကားတွေပါ။(ဒဿမ သုညတွေ ဘာတွေ မလိုတဲ့ သန်းချီတန်တဲ့ ပန်းချီကားတွေနော် စွခွေး ငယ်ကျွန်ကြီးတို့.. သိဖို့ သိဖို့)– ကိုပေါက်ကြီးကိုလည်ကံစမ်းမဲဖောက်တဲ့နေ့မှာ သီချင်းဆိုပေးပါလို့
အနိုင်ကျင့်တောင်းဆိုထားတော့ သီချင်းတွေလည်း နားထောင်ရင်း ကံစမ်းမဲတွက် ရင်ခုန်လို့ရဆိုတော့က2in 1 အစီစဉ်လေးပါနော်။–
ကိုကျော်(ကိုမင်းမော်ကွန်း)၊ ဒါရိုက်တာ ကိုသည်ခေတ်နေတို့ကိုလည်းLive ကံစမ်းမဲပွဲကိုတက်ပေးဖို့အတွက် ခေါ်ထားပါတယ်။
ဘုန်းဘုန်းအရှင်ထာဝရ(န်ာဝေ) ကတော့ ရှင်အေးဘုံရဲ့ဆရာသမားဆိုတော့ မတက်မနေရကို ချောဆွဲလိုက်တယ်ပြောမနိုင်၊ ဆိုမရ၊ ဆူလိုက်ငိုက်လိုက်နဲ့ ဆုံးမနေရတဲ့ ဘုန်းဘုန်းလည်း မောရှာနေလောက်ပါပြီ။ ဟီးးးး)
ဪ… Presenters အနေနဲ့ကတော့ ဒေါ်ရှင်အေးဘုံ ဒုက္ခပေးတဲ့ ဒုက္ခတွေကြောင့် Dday Channel တွက် ကူပေးဖို့ အကူညီတောင်းရာကနေ ၅၀၅ နဲ့ သူ့ဘာသာရိုးရိုးဝရမ်းပြေးကနေအခုတော့ ဇွန်းတပ်ဝရမ်းပြေးသရုပ် ဆောင် ကိုသီဟထွန်းနဲ့ ဓာတ်ဆရာကြီး ကိုရဲဟိန်းတို့ဖြစ်ပါတယ်နော်။
(ရှင်အေးဘုံ ငါးမွှေထိုး)လက်မှတ်ဝယ်မယ်ဆိုရင် တစောင် ၂၀၀၀၀ ကျပ်နဲံဝယ်လို့ရပါသေးတယ်။ထုံးစံတိုင်း page messenger မှာနာမည်(သို့) nickname/ လက်မှတ်အစောင်ရေ/ ငွေလွှဲမယ့်ဘဏ် ရေးထားပေးရုံပါပဲ။
ကဲ…. ၁၆ ရက်နေ့၊ ည ၇ နာရီကျရင် Dday channel နဲ့ People’s Voices Page မှာ လွှင့်မယ့် Live မှာတွေ့မယ်နော်။ဘယ်သူတွေက သန်းချီတန် နွေဦးပန်းချီကား ကံထူးလဲ ရင် ခုန်ရင်း သီချင်းလည်းနားထောင်ကြမယ်နော်။( ရှင်အေးဘုံရဲ့ ခပ်စွာစွာ စကားပြောတာပါကြားရဦးမှာတော့ သည်း ခံပေးပါ)
လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမက ဒါ႐ိုက္တာကိုေပါက္ဆြဲထားတဲ့ သိန္း ၁၆၀ တန္သြားတဲ့ ပန္းခ်ီကားေတြရဲ႕ အေၾကာင္းကိုေပါက္ႀကီးကို ပထမဆုံးေတာင္းပန္ခ်င္ပါတယ္ေနာ္။
Admin ဝရမ္းေျပးက ေနရာေျပာင္းရင္း၊ တြင္းေအာင္းရင္းနဲ႔ ေသခ်ာမေရာင္းေပးႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ေနာက္ၿပီး ပညာေရး Live show လက္မွတ္ကေရာင္းေပးရမယ့္ တာဝန္ႀကီးပါ ေရာက္လာေတာ့ အဲ့ဘက္ အရင္ေရာင္းေပးေနခဲ့ရတာပါ။
(ပါေလရာ ေဒၚေအးဘုံကို ကိုယ့္ညီမအငယ္ဆုံးေလး မလိမ္မိုး မလိမ္မာေလးကိုထုံးစံတိုင္း ခြင့္လႊတ္ေပးပါ ကိုႀကီးကိုေပါက္ေရလက္မွတ္ ၁၀၀၀ မွာ ၇၉၁ ေစာင္ ေရာင္းၿပီးခဲ့ပါၿပီ။
(ဝယ္လို႔ရပါေသးတယ္ေနာ္) ၇၉၁ ေစာင္ဆိုေတာ့ က်ပ္ သိန္း ၁၆၀ နီးပါးတန္တဲ့ ပန္းခ်ီကားေတြျဖစ္သြားပါၿပီေနာ္။
ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရး ပန္ခ်ီကားတန္ဖိုးဟာ စြပုေျပာသလို သန္းနဲ႔ေျပာရင္ေတာ့ ၁၆ သန္းတန္ ပန္းခ်ီကားေတြပါ။(ဒႆမ သုညေတြ ဘာေတြ မလိုတဲ့ သန္းခ်ီတန္တဲ့ ပန္းခ်ီကားေတြေနာ္ စြေခြး ငယ္ကြၽန္ႀကီးတို႔.. သိဖို႔ သိဖို႔)– ကိုေပါက္ႀကီးကိုလည္ကံစမ္းမဲေဖာက္တဲ့ေန႔မွာ သီခ်င္းဆိုေပးပါလို႔
အႏိုင္က်င့္ေတာင္းဆိုထားေတာ့ သီခ်င္းေတြလည္း နားေထာင္ရင္း ကံစမ္းမဲတြက္ ရင္ခုန္လို႔ရဆိုေတာ့က2in 1 အစီစဥ္ေလးပါေနာ္ ။
ကိုေက်ာ္(ကိုမင္းေမာ္ကြန္း)၊ ဒါ႐ိုက္တာ ကိုသည္ေခတ္ေနတို႔ကိုလည္းLive ကံစမ္းမဲပြဲကိုတက္ေပးဖို႔အတြက္ ေခၚထားပါတယ္။
ဘုန္းဘုန္းအရွင္ထာဝရ(န္ာေဝ) ကေတာ့ ရွင္ေအးဘုံရဲ႕ဆရာသမားဆိုေတာ့ မတက္မေနရကို ေခ်ာဆြဲလိုက္တယ္ေျပာမႏိုင္၊ ဆိုမရ၊ ဆူလိုက္ငိုက္လိုက္နဲ႔ ဆုံးမေနရတဲ့ ဘုန္းဘုန္းလည္း ေမာရွာေနေလာက္ပါၿပီ။ ဟီးးးး)
ဪ… Presenters အေနနဲ႔ကေတာ့ ေဒၚရွင္ေအးဘုံ ဒုကၡေပးတဲ့ ဒုကၡေတြေၾကာင့္ Dday Channel တြက္ ကူေပးဖို႔ အကူညီေတာင္းရာကေန ၅၀၅ နဲ႔ သူ႔ဘာသာ႐ိုး႐ိုးဝရမ္းေျပးကေနအခုေတာ့ ဇြန္းတပ္ဝရမ္းေျပး သ႐ုပ္ေဆာင္ ကိုသီဟထြန္းနဲ႔ ဓာတ္ဆရာႀကီး ကိုရဲဟိန္းတို႔ျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။
(ရွင္ေအးဘုံ ငါးေမႊထိုး)လက္မွတ္ဝယ္မယ္ဆိုရင္ တေစာင္ ၂၀၀၀၀ က်ပ္နဲံဝယ္လို႔ရပါေသးတယ္။ထုံးစံတိုင္း page messenger မွာနာမည္(သို႔) nickname/ လက္မွတ္အေစာင္ေရ/ ေငြလႊဲမယ့္ဘဏ္ ေရးထားေပး႐ုံပါပဲ။
ကဲ…. ၁၆ ရက္ေန႔၊ ည ၇ နာရီက်ရင္ Dday channel နဲ႔ People’s Voices Page မွာ လႊင့္မယ့္ Live မွာေတြ႕မယ္ေနာ္။ဘယ္သူေတြက သန္းခ်ီတန္ ေႏြဦးပန္းခ်ီကား ကံထူးလဲ ရင္ခုန္ရင္း သီခ်င္းလည္းနားေထာင္ၾကမယ္ေနာ္။( ရွင္ေအးဘုံရဲ႕ ခပ္စြာစြာ စကားေျပာတာပါၾကားရဦးမွာေတာ့ သည္း ခံေပးပါ)
Previous Article ယောကျာ်းလေးတွေ အထင်သေးသွားနိုင်တဲ့ မိန်းကလေးတို့ရဲ့မကောင်းတဲ့ အပြုအမူ (၃) မျိုး(ချစ်နှမငယ်တို့ ဒီအချက် သုံး ချက်ကို ရှောင်နော်)
Next Article ဝမ်းနည်း စိတ်ထိခိုက်​ပေမယ့် သူရဲ​ကောင်း​တွေ အများကြီးရှိသေးတယ်လို့ အားတက်စေမယ့်စကား ပြောလာတဲ့ မင်းမော်ကွန်း